SIDEE LOO JARAA KAABAJKA SHEYGA SI SAX AH: SIYAABAHA LOO JARAYO KHUDRADDA SHIINEESKA AH EE SALADHKA IYO SAXAMADA KALE, ULAHA OO LA JARJARO GACMAHAAGA IYO QALABKA KORANTADA, SAWIR - BEER CAGAARAN
Qalabaynta cunto Kaabashka Beijing: sida loo gooyo salad iyo suxuun kale?
Kaabashka Beijing waa alaab aad u faa'iido leh oo asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha, kaas oo, isla mar ahaantaana dhadhan wanaagsan.
Qaar waxay u cunaan si gooni gooni ah, qaar waxay ku daraan saladhka, qaar baa ka samaysan duuduubyo, digsi, ama xitaa walxo. Xeeladda aadanaha ee kiiskan waa mid aan xaddidnayn, qof walbana wuxuu ka heli karaa buug-gacmeed ay jecelyihiin.
Wax kasta oo aad karsato, waa mid aad u muhiim ah in la jarjiro kaabajka Peking si sax ah, kaas oo lagaga wada hadlay qodobkan.
Maxay muhiim u tahay in la sameeyo saxan?
Waxaa muddo dheer la ogaaday in dhadhanka saxda ah waxay ku xiran tahay jarista. Isku day, tusaale ahaan, inaad soo bandhigto salad Caesar ah, taas oo la gooyey mugga digaag sida Olivier, ukunta digaagduurku waa la jarjarey, aan la jarjarin, iyo yaanyo cherry ah ayaa lagu jarjarey xabado yaryar. Tani maaha in ay noqon doonto sida saxda ah ee qof walba ogyahay, qaar badan ayaa jecel.
Marka lagu daro dhadhanka, muuqaalka saxanka iyo xajmiga waxay sidoo kale ku xiran tahay goynta, taas oo aad muhiim u ah in la ilaaliyo haddii saxanka loo diyaariyey martida martida, qoyska qosolka ah ama miiska xafladaha. Ugu dambeyntii, goynta aan habooneyn waxay u horseedi kartaa in ay lumiso qaar ka mid ah kaabash aan waxtar lahayn.
Sidee loo qaataa liiska?
Wax walba waa sahlan:
Mindhada waa in ay ahaato mid fiiqan sida ugu macquulsan, oo si fiican u fiiqan, oo leh daabac dheer oo dhexdhexaad ah (udhow ballaaran) si si sax ah iyo si sax ah u jaraan caleemo khafiif ah.
Wareer ama sanduuq alwaax ah ayaa la qaadaa - sidoo kale maaha wax, ilaa inta dusha sare ay u siman tahay (inkastoo ay u badan tahay inay u fududaan doonto in la gooyo guddiga alwaax).
Waxaan sidoo kale u baahanahay baaquli qoto dheer.
Cabbirka cutada wuxuu ku xiran yahay saxanka kaas oo kaabajka la jaray:
On salad Caesar, tusaale ahaan, kaabajka Peking, on lid ku ah, waa la gooyaa aad u weyn.
On Kim Chi - xitaa weyn (xaqiiqda - ku dhowaad aan la jarin).
Shredder ayaa sidoo kale ku yimaadda qiyaaso kala duwan - Kaabashka jarjaran ee la jarjarey ayaa u socda saladhka, ballaaran - maraqa iyo suxuunta kale ee lagu daaweeyo kuleylka.
Kala saar caleemaha madaxa, madaxa daadi, oo si fiican u biyo raaci.
Ku shub biyo qabow galay baaquli iyo darajo Kaabashka Beijing ka baxo dhowr daqiiqadood si ay u ilaaliyaan qaabkooda iyo casriyeynta.
Qaado caleemaha ka bax biyaha, iyaga ruxee oo qallal waraaqaha warqadaha.
Xaalad kari ma aha in laga takhaluso qaybta cad ee caleemaha: waa midka ugu casiir badan oo ka kooban nafaqooyin ka badan qaybta cagaaran.
Sidee loo gooyaa Kim Ji?
Kim Chi - Salad Kuuriya, dhowaan timid Ruushka. Wixii diyaarinta waxaa loo isticmaalaa caleemaha kaabajka Peking, dhirta xal gaar ah. Arrintan awgeed Caleemaha kaabajka Peking waa la gooyaa hab gaar ah:
Waxay qaadataa miraayada kaabajka ah, dhaq biyo yar oo qabow, caleemaha sare ayaa laga saaraa.
Fargeetada kaabashka ah ayaa la jarjarey qeyb ka mid ah dhererka petioles (qaybo cad) si aanay u dhaawacin caleemaha. Si tartiib ah u kala saar cirbadaha si tartiib tartiib ah sidaa darteed caleemaha Kaabashka Beijing ayaa si tartiib ah uga soocaya midba midka kale.
Barkin kasta wuxuu u baahan yahay in la gooyo marxaladdaha petioles oo kala qaybsan, ilaalinta sharafta caleemaha.
Isla mar ahaantaana, haddii mashiinka kaabashka ah la qaato waxoogaa yar, waxaa la gooyaa oo keliya laba qaybood.
Natiijada ayaa la mid ah afar qaybood oo qoyan oo lagu qooyay xal gaar ah.
Saliidda Kaysar ku rid
Caadiyan, "Caesar" Kaabashka Peking waa la jarjarey. Laga soo bilaabo caleen, sida caadiga ah, waxay gooyeen oo ka tagay oo kaliya qaybta cagaaran. Qaybta cad, qayb adag oo caleen ah ayaa lagu dari karaa maraq ama waxaa lagu dhajin karaa wax. Qeyb kasta oo cagaaran oo caleen ah waa in loo qaybiyaa laba ama afar qaybood (iyadoo ku xiran rabitaankaaga iyo baaxadda xaashida).
Kala duwanaansho kale oo goynta ah, aan caadi ahayn - in la gooyo ama lagu jeexo manhajka oo dhan (oo ay ku jiraan qeybta cad) oo ku jira laba jibbaar 2x2. Inkasta oo xulashadani aysan ahayn mid caadi ah, waxay noqon kartaa mid ka sii wanaagsan, sababtoo ah qaybta caddaanka ah ee kaabashka Chinese, taas oo aan u tagin Salad Caesar ah ee cutubka dhaqameed, waa badan oo casiir leh oo ka kooban waxyaabo badan oo waxtar leh.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo jarayo kaabajka shinnida. Tani waa hab aad u dhakhso badan oo habab kala goynta ah.
Diyaarshay (maydhay, iwm.) Kaabashka waa in lagu dhejiyaa guddiga oo gooyaa laba qaybood oo caddaan ah. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad dhigto qaybo ka mid ah kaabajka on board hoos u jaray iyo, isku dayaya oo dhan waqti ay sameeyaan indents isku mid ah, ka bilaabo ka soo cidhifyada jar jeexjeexo kaabashaha. Tani waxay kaa caawinaysaa inaad jarjartid kaabajka. Goynta noocan oo kale ah waxay ku fiican tahay saladhka.
Diyaar gareyn weyn, waxaad kaloo u baahan tahay inaad u kala qaybiso koofiyadaha kaabajka ah laba qaybood, ka dibna kala gooyo badhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Waa inay sameeyaan meelo siman. Isku dheji koofida ballaaran ee aad rabto. Xiddiga weyn ee loo isticmaalo waxaa badanaa la isticmaalaa haddii aad doonayso in aad ku darto kaabajka foosto ee maraq ama cunto kale oo kulul, i.e. kuleylka u daawee.
Habka ugu fudud uguna dhaqsaha badan ugu dhaji karo kaabash Shiinaha waa shredder ee alaabta jikada ee caadiga ah, sida isku darka, qasacad iyo Booqdayjiraha hilibka leh qajaarka for khudaarta. Tani waa tan sidan oo kale:
Kaabashka, maydhay oo la qalajiyey tuwaal waraaqo ah, ayaa la jarjarey oo googooyaa, si ay si fudud ugu gudbi karaan furitaanka. Ha ku shubin qaybo aad u badan oo kaabajka: waxay jebin kartaa qalabka.
Marka xigta waxaad u baahan tahay inaad soo ururiso qalabka adigoo ku rakibaya heesada si aad u tirtirto qiyaasta la rabay.
Daar qalabka iyo si tartiib tartiib ah u googooyaa kaabajka cusub ee shinniinka ah, iyada oo ay ku riixeyso boogta isbaarada leh ee budada.
Isticmaalka qalabka korontada ayaa suurtogal u ah in lagu gaaro shaati aad u fiican, taas oo ku haboon saladhaha qaarkood.
Haddii aad jarjartey kobcinta Shiinaha, waa inaad xusuusataa sida loo qabto mindida, sababtoo ah waxa ay saameeysaa xawaaraha shayga iyo badbaadada dhacdadan.
Mindhada waxaa lagu qabtaa dhammaan xagasha geedka, halka suulku ku yaal dhinaca dhinaca maqaarka, farta calaamadsan ayaa saaran mindida sare, sida "riixaya" maqaarka, iyo faraha kale waxay hoosta ku hayaan, laakiin ma jirto wax xiriir ah oo aan la lahayn meydka.
Hubi waxa Kaabashka Peking u eg yahay sawirka.
Maxay tahay goynta khaldan iyo maxay tahay arrin khatar ah?
Kufsi aan habooneyn ee Kaabashka Peking ayaa googooyey in cabbir aan habooneyn saxan gaar ah. Si fudud u dheji, shaatiikh khafiif ah ee kaabajka on Caesar, xaleef yar oo ku saabsan Kim-Chi yihiin dhammaan kuwa tusaale ahaan ka jarjarid qaldan ee Kaabashka Peking.
Cawaaqibta arrintani waa mid la fahmi karo - xaqiiqda, waxay u muuqataa in ay tahay saxan gebi ahaanba ka duwan, maaha mid aad rabto in aad karisid. Xaqiiqdii wuu dhadhamin karaa dhadhan ahaan. Tusaale ahaan, haddii ay tahay mid aad u khafiifsan si ay u jaraan kaabajka Kaysar, caleemaha waawayn ee digaaga, halbaha yaanyo cherry ah iyo laba jibbaar ah oo khafiif ah kaabajka Peking waxay noqon doontaa fargeeto. Dabcan, tani ma noqon doonto saladh isku mid ah oo laga helo makhaayado fiican.
Sidaa darteed, waxaan kuu sheegnay sifooyinka saxda ah ee kaabajka saxda ah ee China, oo ku saabsan diyaarinta kaabajka, oo ku saabsan noocyada kala jarista iyo mid kasta oo loo isticmaalo waa la isticmaalaa, qalabkee ayaa looga baahan yahay goynta iyo waxa khatarta ku leh arrintan xasaasiga ah. Waxaan rajeyneynaa in qodobkayagu kuu noqon doono mid waxtar leh adiga iyo suxuunyaduna waxay noqon doonaan sida saxda ah ee aad rabto inaad u karisid. Waxaan kuu rajeyneynaa nasiib wacan karinta!